Shina Transparent Greenhouse Fabric orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
ShiningPlast Woven Translucent Greenhouse Fabric dia fitaovana tsara kokoa hanampiana ny tetikasa mitombo tsy manam-paharoa. Safidy safidin'ny be mpampiasa ihany koa izy io.
Lanja lamba: 100 gsm ~ 250 gsm
harato: 8 * 8 ~ 16 * 16
Fomba fanenona: rano jet loom
Accessories: Afoina miaraka amin'ny tady, volon-tany ao anaty elanelany tongotra 3 tongotra manodidina ny sisiny rehetra.
Ny tenona vita amin'ny polyethylene avo lenta mangarahara manelanelana sy nohamafisin'ny polyethylene ambany ambany dia manome fangaraharana lehibe izay ahafahan'ny zavamaniry handrehitra ny tara-masoandro amin'ny fomba mahomby kokoa.
Izy io koa dia nokarakarain'ny fitsaboana UV mahery mba hahatohitra ny tara-pahazavana mahery vaika ao amin'ny faritra sasany ary afaka mitazona hery tsara efa ela. Noho ny akora polyethylene manta lehibe dia afaka manohitra ny mari-pana midadasika.
Araka ny fangatahanao, ny ShiningPlast dia afaka manome ihany koa isa isan-karazany amin'ny 8 * 8 ~ 16 * 16 hanoherana ny fangatahana samihafa ataonao.
Namboarina tamin'ny alàlan'ny teknika fanenon-doko tsara sy coating, ShiningPlast Greenhouse dia afaka mijanona ho fananana matanjaka sy maharitra mandritra ny fotoana maharitra.
.Lowage Shrinkage Rate:
Ny tahan'ny Shrinkage tsara dia miantoka amin'ny lamba volontsôkôlinao ao anaty tanimbola tsy misy ahiahy amin'ny ranomaso na ny andriambola noho ny haben'ny fiovana.
Ny lamba lamba ShiningPlast Clear Greenhouse dia manome ny rano fiarovana sy miaro lava mandritra ny toetr'andro, fametrahana na famoronana rehefa avy mampiasa azy io.
Fantatsika fa ny fametrahana UV dia fananana lehibe indrindra amin'ny fepetra takiana amin'ity lamba ity. Ny fitsaboana UV mahery ataontsika dia hahatonga ny lamba ho mijanona sy maharitra mandritra ny fiposahan'ny UV mahery.
Previous: Famandrihana Leno Scaffold
Manaraka: Woven PP Weet Mat